Rikoooo.com - fianjerana Saratov Airlines
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 18 feb 2018, 12:30
Ny seranam-piaramanidina Saratov Airlines 703, Antonov An-148, dia rava taorian'ny fiantraikany teo amin'ny tany akaikin'i Stepanovskoye, Rosia. Ny mpandeha rehetra 65 sy ny mpikambana ao amin'ny 6 dia maty.
Nalain'ny fiaramanidina avy eny amin'ny làlan-kilometatra 14R tao amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo ao Moscow ny 14: ora ora Xnumx (21: 11 UTC). Ny toetr'andro momba ny fotoana fialana amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo dia nahitana fahitana (21m) voafaritra mazava nandritra ny lanezy matevina. Temperatila dia -2100 ° C, rakotra rakotra rahona tao amin'ny AGN 5.
Ny komity mpanafatra ny seranam-piaramanidina dia nilaza fa talohan'ny nialàny, dia tsy niova ny fanamafisana ireo tobim-pitaratra telo.
Taorian'ny fisintonana, teo amin'ny habakabaka 130-150 m (425-490 ft) ambonin'ny haavon'ny tany, dia nirotsaka ny autopilot. Nipoitra ny sambokely satria niakatra ny haavon'ny 550 m (1800 feet) ny fiaramanidina.
Mikasika ny 2 minitra 30 segondra aorian'ny fisintonana, eo amin'ny haavon'ny 1300 metatra (metatra 4265) sy ny hafainganam-pandeha 465-470 km / h, dia misy ny tsy fitoviana eo amin'ny lahatsoratry ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny kapitenin'ny mpifanandrina raha ampitahaina amin'ny tondrozotra . Ny fiaramanidina eo amin'ny sisin'ny copilot dia tsy fantatra satria tsy nosoratan'ny mpandika angon-drakitra ity sariohatra ity. Tsy nisy fahasamihafana be teo amin'ny mari-pamantarana avo toerana. Taorian'ny 25 segondra hafa dia nahatratra ny 30 km / h ny disadresaka ary nihoatra ny haavon'ny kapitenin-dRavalomanana.
Taorian'ny 50 segondra, teo amin'ny halaviran'ny 2000 metatra (6560 ft), ny fiaramanidina teo amin'ny fiaramanidina mpamonjy voina dia ambony ary nitohy nitombo hatrany raha nitohy nitombo ny fiaramanidina teo amin'ny lehiben'ny ASI.
Nanaisotra ny fiaramanidina ny ekipa mpanafika. Nihena ny fiaramanidina teo amin'ny sefon'ny kapitenin-tsika, raha ny ASI kosa dia nampiseho 540-560 km / h. Tokony ho tamin'ny 50 segondra aorian'ny nanavahana ny fiaramanidina, dia nandalo ny haavon'ny 1700-1900 m (5580-6230 ft) ny fiaramanidina miaraka amin'ny entana mavesatra hatramin'ny 1.5 ka hatramin'ny 0.5 g. Taorian'izay dia nidina an-dalambe ny fiaramanidina niaraka tamin'ny ASI teo amin'ny andaniny kapitaly mampiseho 0 km / h, ary ny ASI aseho mampiseho 200 km / h. Nihena ny angatra nianjera tamin'ny -30 / -35 degrees miaraka amin'ny valin'ny fihodinan'ny 0 g.
Ny fiaramanidina dia niantraika tamin'ny saha feno lanezy manodidina ny 14: 27: 05 ary nipoitra. Talohan'ny fifandonana tamin'ny tany, nitombo ny ASI ASI ho an'ny 800 km / h ary ny ASI, kapitenin'ny baolina kitra dia mbola mampiseho 0 km / h.